Lọ ọrụ njem - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Nabata na Histe
Ngwaahịa ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ngwa ngwa ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke sitere na ọkụ ọkụ na-eguzogide ọgwụ silicon na nke ndị ọkachamara roba, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara okporo ụzọ mepụtara site na nyocha na nyocha nke afọ asaa. oyi Wrinkwib USB cable ubi na China, bụ n'okpuru projection nke ala nanị ikike. Mgbe a nwalere site Wuhan High voltaji Research Institute State Grid Corporation nke China, Nation Center maka Quality Supervision na Ule nke Insulator na Anya Arrester, site na mba ụkpụrụ GB11033 , GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-199, ngwaahịa ndị a na e lere eru iru ala ụkpụrụ mba niile akụkụ.
N'etiti ndị ọrụ-256 niile, ndị nwere doctorate ma ọ bụ nzere bachelọ maka 17..
Companylọ ọrụ anyị anọwo na-eduga n'ụlọ n'ụlọ ya na njikwa njikwa nke ọgbara ọhụrụ, ike ọrụ ike, usoro nlekọta na-achịkwa nke ọma, ogo zuru oke na asambodo asambodo, usoro nyocha dị elu yana ọrụ akwadochara.
Ruo afọ 10, anyị enyela ọtụtụ nde eriri akwa akwa na ngwaahịa ntanetị ndị ọzọ na-akwado maka owuwu na mgbanwe nke netwọkụ eletriki mba. Na 2004 ụlọ ọrụ ahụ rụrụ 500kV na ọkụ ọkụ insulators dị ala, 35kV na voltage zinc oxide na-agba ọsọ, na-ekewapụ. mgba ọkụ, dropout fuuz, electric substation busbar tube, wụsịrị booster, cable anya voltaji limiters (igbe), mgbidi bushing, wdg a ghọtara na a akụkọ ihe mere eme itu ukwu si ala na-ajụ voltaji electric ngwaahịa na elu na ibu voltaji otu, si otu ka, na-eme Nnukwu onyinye maka nchekwa ọkụ eletrik maka ụlọ ọrụ eletriki, ụgbọ okporo ígwè, ụlọ ọrụ mmanụ, coal na nnukwu ụlọ ọrụ anyị.